Archive du 16-sept-2021
Mbola mitoetra ny olana Mifampiahiahy ny samy manampahefana
Tsy mety mipetraka ny fahamarinan-toeran’ny Fanjakana Rajoelina aty amin’ny telo taona latsaka nitondrana ny firenena, eny fa nanova ekipa sy governemanta matetika aza.
Efa lasa fiainana
Efa lasa fiainantsika Malagasy ny fisolokiana, hoy ny tomponandraikitra amin’ny sampan-draharaham-panjakana iray, omaly,
Brieville Maty notifirin'ny jiolahy izy mianaka
Nirefodrefotra ny basy tao Brieville ny Alakamisy 09 Septambra lasa teo tokony tamin'ny 07 ora hariva. Andian-jiolahy voalaza fa mitam-piadiana no naka an-keriny Ramatoa mpivarotra PPN tao an-tanàna.
Rodoben’ny mpanohitra Miantso ny mpitandro filaminana hanao ny asany
Fampihorohoroana tanteraka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny olona tsy mitovy hevitra aminy no nisy tany Antsirabe, hoy ny avy eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara
Mpanazatra Eric Rabesandratana “Tsisy fahombiazana azo ao anaty savorovoro”
Nandefa hafatra sy fanentanana handravonana ny disadisa eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra Malagasy ny mpanazatra ny Barean’I Madagasikara Eric Rabenandrasana omaly.
Fanesorana minisitra mivady Mandinika sy miandry fotoana ny Filoha ?
Isan’ny nandrasan’ny mpanara-baovao maro ny tatitry ny filankevitry ny Minisitra omaly 15 septambra 2021, ka niompanan’ny sain’ny maro ny hoe:
Lalam-pirenena faha-7 Fiara 4x4 nivadika, maty ilay ramatoa mpamily
Nisehoana lozam-pifamoivoizana indray tany.amin'ny RN7 akaikin’ny distrikan’ Ihosy omaly ka fiara 4x4 iray no niharan-doza tamin’izany
Ibrahim Amada Namono baolina avy eny amin’ny 35 metatra indray
Velom-panontaniana mihitsy ny mpitia baolina kitra Malagasy ankehitriny hoe fa maninona aza ireto mpilalaon’ny ekipam-pirenentsika ireto no mamiratra avokoa any amin’ny klioban’izy
Navony Pierre Lenoble “Mbola tsy voafehintsika ny demokrasia”
Andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ny 15 septambra, ka naneho hevitra momba io ny Filohan’ny Filankevitra Ambony Miaro ny Demokrasia sy ny Tany tan-dalàna (HCDDED),
Raharaha Ambatobe Manilika any amin’ny mpanohitra ry Lalatiana
Mitodika any amin’ny mpanohitra ny vava basin’ny Minisitry ny serasera sy ny mpomba azy eo anatrehan’ilay resabe nahavoatonontonona azy sy ny vadiny, ary ny mpanakanto malaza Mr Sayda.
Fanapahan-kevitra tsy am-piheverana Tsapa tsara izao ny fahabangan’ny Air Force One
Nomen'ny Filoham-pirenena fiaramanidina manokana nitondra ny Klioban’ny baolina kitra CFFA Andoharanofotsy, izay nihazo an’i Lusaka Zambie omaly alarobia.
Toamasina Jiolahy iray maty voatifitra, roa hafa tafaporitsaka
Anisan'ny jiolahy nanao fanafihana mitam-piadiana tany Toamasina ny 04 septambra lasa teo ny jiolahy iray . Raha tsiahivina kely ny tantara dia lasan'izy ireo tamin'izany ny vola 20 tapitrisa Ar.
Fianarantsoa Vazaha iray tratra nanao maloto an-kalamanjana
Sarotiny mafy ny ao Fianarantsoa amin’ny resaka havoretrana sy ny tsy fanajana ny fahadiovana.
Salon de la rentrée universitaire Hifarana anio etsy amin’ny Aft Andavamamba
Hifarana anio Alakamisy 16 Septambra etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba rehefa naharitra 2 andro ilay Salon de la rentrée universitaire karakarain’ny Novi information.
Antananarivo Mitombo isa ireo marary saina miriaria eny an-dalam-be
Mafy ny fiainana. Tsy misy izay tsy mahatsapa izany ny rehetra antony mampitombo ireo olona marary saina eto amintsika.